कार मालिक धेरै बाह्य कसरी थाहा paintwork र प्लास्टिक कार भित्री तत्व बाह्य प्रभावको विषय हो। आफ्नो हेरविचार र सुरक्षा ध्यान गर्दैन भने, पनि सबैभन्दा महंगा कार अन्ततः चमक लाह गुमाउन, र तिनीहरूले सानो घर मा प्रयोग जस्तो छैन।
microdamages रंग तह गराउँछ निम्नानुसार छन्:
हावा प्रवाह गर्न एक्सपोजर, माटो, बालुवा र धुलो, को सानो कण संग मिश्रित मिसिन को गति समयमा। उच्च गति, क्षति को अब र गहिरो को प्रकटीकरण।
को हिउँदमा विभिन्न अभिकर्मकों को चित्रकला तहमा प्रभाव।
बर्ड गोबर र जैविक प्रभावको अन्य प्रकारका।
एक शरीर को हेरविचार
आफ्नो वाहन को एक आकर्षक उपस्थिति कायम गर्न, तपाईं प्लास्टिक लागि शरीर Polishes र पालिस सबै प्रकारका प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। शरीर र भित्री प्रस्ताव संभावित ग्राहकहरु अधिकतम सुरक्षा र हेरविचार प्रदान उत्पादनहरु को दायरा ह्यान्डल गर्न निर्माताहरु autochemistry। तिनीहरूले Polishes को निम्न प्रकार समावेश:
रंग कोटिंग्स लागि रिकभरी;
र पालिस प्लास्टिक सतहहरु लेपित कपडा;
Polishes को संरचना मा तीन ठूलो समूह विभाजित गर्न सकिन्छ:
कृत्रिम रचनाहरूको (सिलिकन, Polymeric घर्षण);
एक सुरक्षा कोटिंग सिर्जना गर्न मिसिन को पछाडि सामान्यतया प्रयोग मोम वा थप आधुनिक बहुलक मोम छ। कारण यसको अद्वितीय गुण यस्तो हालतमा लाह तह एक वा दुई महिनाको लागि माइक्रो-यो उद्भव जोगाउँछ।
दोष पहिले नै उपलब्ध छन् भने, खरोंच देखि आफ्नो पालिस लुकाउन मदत गर्नेछ। आफ्नो मिशन - कवर मा क्षतिग्रस्त क्षेत्रमा मास्क र शरीर को निरन्तर सुरक्षा सुनिश्चित गर्न। सामान्यतया, यो घर्षण रचनाहरूको प्रयोग गरेर बाह्य कोटिंग को गुणात्मक विशेषताहरु को कमी। तिनीहरूले पातलो रंग प्रयोग गर्दा लाह को क्षतिग्रस्त तह हटाइयो।
विशेष उल्लेखनीय रूपमा चिनिने यो हालतमा छन् "पानी ग्लास।" मिसिन को सतह अनुप्रयोग पछि तिनीहरूले पातलो तर अति टिकाउ फिलिम गठन। यो कोटिंग, साना असिद्धता लुकाउँछ नयाँ घाउ को घटना को सम्भावना देखि मिसिन सुरक्षा र प्रतिभा पुर्जा वृद्धि गर्छ।
मिसिन को भित्री को हेरविचार
घरेलू रासायनिक कार हेरविचार तपाईं effortlessly आफ्नो वाहन विशेष चमक र चमक को सानो घर बनाउन अनुमति दिन्छ। यसको विशेष संरचना र विभिन्न additives धन्यवाद, यी उपकरण तपाईं मात्र होइन अद्यावधिक वा सतह सफा गर्न अनुमति, तर पनि तिनीहरूलाई सानो कमजोरीहरू मास्क (खरोंच, चमक को हानि र nipped, साना चिप्स रंग) गर्न सक्षम छन्। अक्सर प्रयोग प्लास्टिक लागि भित्री पलिश र सफाई स्प्रे को सबै प्रकार मा। तपाईं जब प्लास्टिक प्रशोधनका लागि एक कार रसायन छनौट खोज्न आवश्यक मात्र कुरा हो, यो सामग्रीको खर्च छ। किनभने रक्सी प्लास्टिक को माथिल्लो तहहरू नष्ट गर्न सक्षम छ प्लास्टिक भागहरु लागि चमकाने मिसिन मा रक्सी अंश को उपस्थिति, अस्वीकार्य छ।
burnout र रंग को हानि रोक्न क्रममा ड्यासबोर्डमा, justifiably कोटिंग यूवी रेज गर्न प्रतिरोधी प्रदान जो एक सुरक्षा प्लास्टिक पोलिस प्रयोग।
छत र भित्री तत्व कहिले काँही आवश्यक सफाई प्रक्रिया डिटर्जेंट वा साबुन असबाबवाला। कि पछि तिनीहरूले एक विशेष सुरक्षा संरचना sprayed। यसको गुण रह्नुहोस, antistatic र कपडा धूलो गुण दिनकै गर्न सक्षम छन्, तर पनि प्रदूषक सामाग्री को गहिरो तहहरू भित्र पस्नु गर्न अनुमति छैन।
ईंन्धन खपत दर गणना महत्त्व
पैड प्रतिस्थापन पछि गरम ब्रेक डिस्क। को ब्रेक डिस्क परिवर्तन गर्दा
एक परामर्श कम्पनी के हो? यसको भूमिका र व्यापार मा कार्यहरू
जाडो के हो? विस्तृत विश्लेषण
संसारमा सबैभन्दा पुरानो आमा: तथ्याङ्क आफ्नो बुढ्यौली बारेमा भन्न
शरीर र प्राण लागि स्नान कसरी चयन गर्न
Sukhmantra Resort र स्पा4* (भारत / गोवा): समीक्षा
अलेक्जेन्ड्रिया होटल: वर्णन, प्रतिक्रिया। मिश्रको बिदाहरू
हार्डवेयर प्रवेग के हो?